ချစ်သော ဆဲလက်(ဘ်) – British Celeb | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Celebrity » ချစ်သော ဆဲလက်(ဘ်) – British Celeb	25
ချစ်သော ဆဲလက်(ဘ်) – British Celeb
ပျင်းတိုင်း ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး …
အားတိုင်း ဖဘပေါ်မယ် ကိုယ့် အကြိုက် နိုင်ငံစုံက မင်းသားမင်းသမီးတွေ အကြောင်း ပွါးနေရင်းနဲ့ ရွာဘက် ပို့(စ) စီးရီးဆွဲဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
စစချင်း ဗြိဒစ်(ရှ) မင်းသားမင်းသမီးတွေ အကြောင်း ပွါးရအောင်။
အမှန်ပြောရရင် အမေရိကန် မင်းသားမင်းသမီးတွေထက် ဗြိတိရှ မင်းသားမင်းသမီး အမူအရာတွေကို စကားပြောပုံတွေကို စိတ်ထဲ ပိုတွေ့တယ်။
(ဒီ ပို့(စ) မှာတော့ ဂလိုပဲ ပြောရမှာပေါ့။ ဟိ။ နောက် ပို့(စ) တွေက နောက်တစ်မျိုးပေါ့)
ကိုယ့်အကြိုက် ဗြိတိရှ် မင်းသားတွေ အကြောင်း အရင်ပြောမယ်.. ခုခွိ..
တစ်ချို့ တစ်ယောက်ချင်းစီ အကြောင်းတော့ ပြောဖူးးပါရဲ့.. သာမာန်အားဖြင့်တော့ ကိုယ်က အမေရိကန် ကားတွေ ပိုကြည့်ဖြစ်တာ..
အင်္ဂလိပ် မင်းသား/မင်းသမီးဆိုလည်းး ဟောလိဝုဒ် ရောက်မှသာ သတိထားမိတာ..
၁) Sean Connery – 007 အဖြစ်လူသိများပါတယ်.. အမှန်က စကော့တစ်ရှ် မင်းသားဖြစ်ပေမယ့် ဒီစာရင်းထဲပဲ ထည့်ထားပါရစေ.. အမူအရာ ကောင်းပြီး ရိုက်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ မှန်သမျှ ကြည့်ပျော် ကောင်းမွန်တာမို့ ကြိုက်ပါတယ်..
၂) Pierce Brosnan – 007 မင်းသားတွေထဲမှာတော့ အချောဆုံး မင်းသားကြီးပါ.. အချစ်/ဟာသ/ဂီတ ကားတွေ မှာလည်း သရုပ်ဆောင် ကောင်းသူမို့ 007 ကားတွေ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သူ့ကို ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်..
၃) Christian Bale – Batman မင်းသားထဲ မှာ အကောင်းဆုံးမင်းသား အဖြစ် လူသိများပါတယ်.. အမူအရာ ဘက်စုံ ရ မင်းသားပါ..
၄) Orlando Bloom – Lords of the ring ကားတွေနဲ့ နာမည် ရလာပြီး Pirates of the Caribbean ကားတွေမှာ နာမည်ကြီးမင်းသားဖြစ်လာတာပါ။ ဘက်ခ်ဟမ်း နဲ့ တူလို့ ကြိုက်တာ က လွဲရင် ဘာမှ ပြောစာမရှိပါဘူးး ခိခိ..
၅) Benedict Cumberbatch – အချစ်ဆုံး ရှားလော့လေးး ပေါ့.. အမူအရာရော Personality ရော အကြိုက်ဆုံးမို့ ကိုယ့် ဘရန်းဒက် မင်းသားအဖြစ် ထားးထားးပါတယ်..
၆) Eddie Redmayne – မူရင်းရုပ်ကို ဖျက်ပြီးကို သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသား အဖြစ် နာမည်ကြီးပါတယ်.. Theory of Everything မှာ မကြိုက်ပေမယ့် The Danish Girl မှာတော့ သရုပ်ဆောင် အတော်ကောင်းကြောင်း သတ်မှတ်လိုက်ရပါတယ်..
၇) Tom Hardy – ဘာလို့ ကြိုက်တုန်း သိချင်ရင် The Mean War ကိုသာ ကြည့်ကြပါ.. ဟိ.. Mad Max Fury တော့ မုန်းတယ်..
၈) Daniel Redcliffe – Harry Potter ချစ်သူ မို့ ငယ်ကတည်းက ချစ်လာတာမို့ ဘာကားနေနေကြည့်ပါတယ်.. စကားပြောပုံကို ချစ်တာကိုးး
၉ ယောက်မြောက်တော့ ဘယ်သူလာမယ် မသိသေးး
Divergent ကားက မင်းသား James Theo ဖြစ်ဖို့များတယ်။
ချစ်သော ဗြိတစ်ရှ် မင်းသမီးများ အလှည့်ရောက်ပါပြီ.. ဟောလိဝုဒ်ကားတွေထဲမယ် ထင်ထင်ရှားရှား လှတယ်တို့ အမူအရာ သိပ်သည်းတယ်လို့ သိမှတ်မိလိုက်တိုင်းး ဗြိတစ်ရှ် မင်းသမီးတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်လေ… နည်းနည်းလည်းး ပြည့်ပြည့်ဝဝ ရှိကြတယ် ..
၁) Kate Winslet – Titanic မှာ စသိကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းး ဇာတ်ကောင်စရိုက်အသားပေးဇာတ်လမ်းတွေမှာ ပီပြင် တာမို့ ဆုတွေ အများကြီး သိမ်းပိုက်ထားနိုင်တဲ့ မင်းသမီး
၂) Naomi Watts – အထင်ရှားဆုံး ပြောရရင် King Kong မင်းသမီးပါ.. ကိုယ်ကတော့ သရဲကားး The Ring မှာထဲ က ကြိုက်ခဲ့တာ ..
၃) Rachel Weizs – Mummy ကားး ပရိတ်သတ် ဆို သူ့ ကို ရင်းနှီးမယ်လေ.. Typical အင်္ဂလိပ်မ ရုပ်မှာ သာသာထိုးးထိုးး လှတဲ့ မင်းသမီးလို့ ပြောရမယ်ထင်…
၄) Emily Blunt – နီးနီးစပ်စပ် သိအောင်ပြောရရင် ခု နောက်ဆုံး Huntsman ကားက ရေခဲဘုရင်မ.. မိုးလတ် ညွှန်းလို့ ကြည့်ဖြစ်တဲ့ Sicario မှာ မှ စသိတာ.. အမူအရာကောင်းးး
၅) Rosamund Pike – 007 Die Another Day မှာမှ ဂျိန်းစ်ဘွန်း ကားထဲက မင်းသမီးအဖြစ် သတိထားမိပြီးး Gone Girl ကြည့်ပြီးး အားကြီးကြိုက်သွားတော့တာပါပဲ ..
၆) Catharine Zeta Jones – ဝေလနယ်သူမို့ ဒီ စာရင်းထဲ ထည့်ပါရဇီ။ ရှားရှားပါးပါး ဆံပင် အနက်နဲ့ အလိုက်ဆုံး မင်းသမီးပါ.. Zorrow ကားမှာ သူ့ အလှ ကို ပိတ်သတ်ကြီးး စ သတိပြုမိ..
၇) Kate Beckinsale – Underworld ပရိတ်သတ်အတွက်တော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ.. ကိုယ်လုံး အရမ်းလှတယ်လေ..
၈) Keira Knightley – Pirates of the Carribian ကားတွေနဲ့ လူသိလာတာပါ.. မကြော်ကြားခင်က ဟိုလိုလို ကားလေးတွေ ရိုက်ခဲ့တယ်လို့ Scandal ထွက်ထားပါတယ်.. But ကြိုက်တယ်..
၉) Emma Watson – ခညာ.. ဟုတ်ပါတယ်.. ရွာထဲ က ကိုကိုတွေ အတော်များများကြိုက်ကြတဲ့ မင်းသမီးလေးပါ.. ဟယ်ရီပေါ်တာကားတွေ တုန်း က ထက် ခု ပို ကြိုက်တယ် ဆိုပဲ.. ခိခု..
၁၀) Emilia Clark – ပုံထဲ မဆန့်လို့ မပါတာပါ.. Games of Throne ရဲ့ နဂါးတို့ ဘုရင်မ ပေါ့.. နောက်ဆုံး Terminator ကားရဲ့ မင်းသမီးပါ.. လောလောဆယ်တော့ သူဟာ မင်းသား လီယိုနာဒို ကို ခွက်ရ်ှနေကြောင်းး ဝန်ခံထားသတဲ့..
နောက်မှ တခြားနိုင်ငံ က Celeb တွေ အကြောင်း ဆက်ရေးမှာ နော်။
Tawwin Pan says: ပုံလေးတွေပဲလိုက်ကြည့်သွားတယ်နော်။ တစ်ယောက်မှမသိဘူးလို့စ်။ အဲလို အနုပညာအားကောင်းတာ။
Harry Potter မင်းသားတော့ သူငယ်ငယ်တုန်းကကြည့်ဖူးတယ်။
တညားတော့ ပုလင်းဖင် မက်မှန်တတ်နေရပြီ။
kai says: အဲဒီ…မင်းသမီးတွေ..(အားလုံး).. ယူကေကမှန်းအခုမှသေချာသိတယ်…။
စတားဝါးထဲက.. မင်းသမီးဒေစီကိုချန်ထားခဲ့တာမို့.. အတင်းထည့်လိုက်ပါကြောင်း…။
ခင်ဇော် says: မကြိုက်တတ်ရှာဘူးးး ၂၄ နှစ်သမီးကို။
အနော် က စတားဝါး ဘယ်ကားမှ မကြည့်၊ မကြိုက်လို့ သူ့ကို မသိဘူးး
kai says: အမှန်ပြောရင်..ဒေစီကို သမီးပိပိလေးကကြိုက်တာ..
ကျုပ်ကတော့.. သွားကိုစေ့ပြီးပါးစပ်ကြီးဟဟ ထားတဲ့..သူ့အက်တင်းကို.. သိပ်ကြည့်မရ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ခင်ဇော် says: ဘယ်သူ့ ကြည့်ရတုန်းး
Wow says: ခု Benedit ကားတွေ ဒေါင်းနေတာ
The fifth estate ရယ်
The imitation game ရယ်ရပြီ
ခင်ဇော် says: အေးး
Thint Aye Yeik says: Daniel Redcliffe ကိုပဲ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဟယ်ရီပေါ်တာ ပထမပိုင်းက စပြီး..တောက်လျှောက်ကြည့်လာလို့…။ ဒါနဲ့ အခုတလော အရမ်းကြိုက်မိနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်(အမျိုးသမီးတွေ)ထဲမှာ…
Super Girl ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက…. မီဒီယာတိုက်ပိုင်ရှင် မီဒီယာဘုရင်မကြီး…
(Super Girl ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့…ဇာတ်ကောင်အမည်က…Cat Grant တဲ့)
သူ့ နာမည်သေချာမသိလို့… ဂူးဂဲထဲမှာ ဗြူးဗြဲကြည့်တော့…. Calista Flockhart လို့ တွေ့တယ်။
အဲ့ဒါ..သူ့နာမည် ဟုတ် မဟုတ်နဲ့….
အခု ထွက်ထားတာ မကြာသေးတဲ့ Huntsman Winter’s War ကားထဲက… ရွှေရောင် ဘုရင်မကြီး..ဟာ..
သူပဲလား… မသိ…။ သိချင်နေတာ။ စူပါဂဲ ဇာတ်လမ်းတွဲထဲမှာ…Cat Grant အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတာ…အရမ်းမိုက်လို့…အတော် သဘောကျမိသွားတယ်။ မြန်မာ မင်းသမီးတွေ…သူ့နောက် တကောက်ကောက်လိုက်ပြီး…အမူအယာ သင်သင့်တယ်။
ခင်ဇော် says: နိ ပြောတာ က အင်္ဂလိပ် မင်းသမီးးလားးးး
ဒီ ပို့စ် က ဗြိတိသျှ စာရင်းးဒေ
Thint Aye Yeik says: နို့… မသိပါဘူး။ နိုင်ငံခြား မင်းသမီးဆိုတာနဲ့… သူ့ပဲ ပြေးမြင်မိလို့…။
.ဗြိမမတွေထဲမှာ..သိတာဆိုလို့… ကိတ်မမ တစ်ယောက်ပဲ…သေချာ…သိ..။ အဟိ။
စကားဇွတ်ကြီးစပ်… ရှားလ်သီရွန်လည်း သရုပ်ဆောင်တာမှာ…မှော်ရော..ကဝေရော…ဆန်နေလိုက်တာနော်…
.ဗမာပြည်ထဲက…အနုပညာရှင်တွေပါဆိုတဲ့ မင်းသမီးမမတွေနဲ့..နှိုင်းယှဉ်မိတဲ့အခါ…. အာဟ အာဟ..
သူ့လည်း သိပ်ကြိုက်တာပဲ သိလားး
အမေရိကန်မင်းသမီး စာရင်းက များလို့ အချိန်ယူနေတယ်။
မြစပဲရိုး says: Jude Law (My favourite) လေ။ ချစ်ဖို့ကောင်း ချန်ခဲ့တယ်လား? :-(((
ဒီ တစ်ယောက် (Jonathan Rhys Meyers) ကလဲ အိုင်းရစ်ပေမဲ့ တစ်ကျွန်းထဲပါ ဇီကလေးရယ်။ ကြိုက်လွန်းလို့စောင့်ကြည့်ရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးပေါ့။ :D
ရုပ်ရှင်ကတော့ သိပ်မအောင်မြင်ဘူး။ Mission: Impossible III မှာ လူကြမ်း။ အခုတော့ ရုပ်က အတော်ပြောင်းပြီး ဇိုးသမား ပုံပေါက်။ https://knoji.com/jonathan-rhys-meyers-trivia-for-king-henry-viii-of-the-tudors-tv-series
ခင်ဇော် says: ချစ်သော အရီးးး
အနော့် ခေါင်းစဉ် ကို က ချစ်သော မို့
ချစ်တဲ့ သူတွေပဲ စာရင်းချထားးဒါ
ဂျု့လော ကို ဘာလို့ မချစ်မှန်းးမသိ မချစ်ဘူးး
သူ့ ကားတိုင်းးလိုလိုတော့ ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် ..
ချစ်တဲ့ စာရင်းးထဲ မပါတာာာ..
ခင်ဇော် says: ဂျိုနသန် ကို မသိဘူးးး
မြစပဲရိုး says: အခုမှ သတိရ လို့ ထပ်လာပြောတာ။
ဗြိတိသျှမင်းသမီး Audrey Hepburn က ကမ္ဘာမှာ အလှဆုံးမင်းသမီး လို့ သူကြီးမင်း နဲ့ ကိုကိုကျောက် ညွန်းခဲ့ဘူးတာ သတိရလို့။
ဟုတ်တယ်။ ဒီမှာတော့ သဘောမျှတယ်။
သူ့လောက် ချောတာ မရှိခဲ့သေးဘူး ထင်ရဲ့။ http://www.everythingaudrey.com/14-iconic-audrey-hepburn-fashion-style-pieces/
ခင်ဇော် says: ကျက်သရေ ရှိတာ ပါပေါင်းထားတဲ့ အလှ
kai says: ဟုတ်ပါ့…။ အလှဆုံးတယောက်…။
သူ့ရဲ့.. အဲဒီစတိုင်ကို… ဒီခေတ်ပြန်ဝတ်ကြဖို့သင့်တယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ရှားလော့လေးကို အချစ်ဆုံးလို့ ပြောထားပြီးပြီနော် မမဂျီး.. အဲ့တစ်ယောက်ပဲ ချစ်တာ..ကျန်တာဖွဲနဲ့စကွဲ.. ဟိ
Emily Blunt ကို Gulliver ကားမှာ စသိတာ.. အဲဒီကတည်းက သိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ.. ရေခဲဘုရင်မမှာလည်း မိုက်တယ်…
ခင်ဇော် says: ချစ်ပါ ချစ်ပါ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ခုလောလောဆယ်တော့ သူ့ပဲ အချစ်ဆုံးဖြစ်နေတုန်းးး
ဘယ်တော့ ပြောင်းအူးမယ် မသိဘူးး
လုံမလေးမွန်မွန် says: ရေမဖြန်းရဘူးထင်တာပဲ..ဟိဟိ
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .မင်းသားမင်းသမီးတွေတော့သိနေပါတယ်..ဒါပေမဲ့ 007 မင်းသားတွေကလွဲလို့ နာမည်နဲ့လူနဲ့တွဲမမှတ်မိဘူး
ခင်ဇော် says: ၀၀၇ မင်းသားက ဒယ်နီရယ်ကလွဲရင် ကျန်တာ အကုန်ကြည့်ရတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဘယ်အောမင်းဓါး ကြိုက်သရဲ
ခင်ဇော် says: အောင်ကြူး